Uhlelo lweTuscan Tile Leveling
Uhlelo lokulinganisa amathayili lwenza ukufakwa kusheshe futhi kufane. Zenziwe ngopulasitiki lukhuni oluqinile ngokwanele ukubamba ngokumelene nesisindo se-tile. Ngenxa yokulinganisa kwayo nemiphetho ehlanzekile, uzothola isiphetho esihle kakhulu kuyo yonke imisebenzi yakho yaphansi. 1.Sinenombolo yemodeli ehlukile ukulingana nesidingo samakhasimende ahlukile. Ama-spacers we-2.Our tile enziwe ngezinto ezintsha ze-100%. Ukufaneleka kwayo kungukubamba okuhle, akunabo ubuthi, akunambitha futhi ihlala isikhathi eside. I-3.Plastic Tile Spacers 1MM ukuya ku-10MM yeWall ...